သစ်နက်ဆူး: Myanmar dance HninNanDar
Myanmar dance HninNanDar
ညကတည်းက တစ်ဆက်တည်းတင်မလို့ ပါဘဲ...နည်းနည်းခက်နေလို့ ....။
သမီးကတော့ ၀မ်းသာပီတိတွေနဲ့ ကွန်မန့် တွေ အိမ်မက်ပြီး အိပ်နေလေရဲ့ .....။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 9:08 PM
စူး January 3, 2009 at 10:16 PM
ကော်မန့် မျှော်တော့ ကလေးဆိုတော့ ပံ့ပိုးရတာပေါ့
သမီးကတာ လှတယ်။ ကြည့်လို့လဲကောင်းတယ်။
အဖေ့အမွေကို လက်ဆင့်ကမ်းသယ်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။
မြန်မာ့ရိုးရာ အနုပညာအမွေအနှစ်တွေ ထိန်းသိမ်းရင်း လက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှပေးရင်း သမီးရဲ့ အနာဂတ်လေး လှပါပါစေ။
ပညာတွေလဲ အများကြီးတတ်ပီး အများအကျိုးသယ်ပိုးတဲ့ သမီးလေးဖြစ်ပါစေ ။
(ဟဲဟဲ အန်တီလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ အသက်သိပ်မကြီးပေမဲ့ ၈တန်းထဲက အန်တီအခေါ်ခံရနေပီမို့ပါ။)
PAUK January 3, 2009 at 10:18 PM
amayarko January 3, 2009 at 10:22 PM
She's so talented, and lovely.
အိမ်လွမ်းသူ January 3, 2009 at 10:37 PM
မိဘ အမွေအနှစ်ကို ဆက်ခံတဲ့သမီးလေး.. အကလည်းတော်.. အဆိုလည်းကောင်းတယ်.. နော်နော်ကြီးရင် မိသားစု ဇာတ်သဘင်ထောင်လို့ရပြီ.. ပေါ့ပိတို့ကတော့ သားအမိသုံးယောက်ထဲနဲ့ အတင်းကို တိုးဝှေ့ပြီးကြည့်နေကြတာ.. မမ ကတာလဲလှတယ်၊ လူကလဲလှတယ်..။ သူတို့လဲ အဲ့လိုကတတ်ချင်တယ်တဲ့..။
သက်ဝေ January 3, 2009 at 11:14 PM
သမီးလေး ကတာ လှလိုက်တာ
စနစ်တကျ လေ့ကျင့် သင်ကြားထားတာရယ်.. မျိုးရိုးဗီဇ နဲ့ဝါသနာကြောင့်ရယ်.. သူကိုယ်တိုင်လေးကိုယ်က လှတာကြောင့်ရယ် ထင်တယ်နော်...
ဒါထက် တစ်ခုလောက် စပ်စပ်စုစုမေးပါရစေ..
သမီးလေးက အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟင်...
ပုံကိုကြည့်ပြီး မှန်းလို့ မရလို့ ပါ... :-P
Life is for Success January 3, 2009 at 11:21 PM
Hi ko Sue,
I am proud of you. I sure can say that she will get more sweet dream when she still perform like that......
အောင်သာငယ် January 4, 2009 at 12:47 AM
ပညာရဲရင့် ပွဲလည်တင့် ဆိုတဲ့ စကားက အလကားမှ မဟုတ်တာဗျာ...
သမီးလေး သည့်ထက်သည် အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် ကိုသစ်ရေ့...
poppi January 4, 2009 at 1:45 AM
ှုI like how you dance . It was pretty.
poppi January 4, 2009 at 1:50 AM
the dance was fast and pretty
SDL January 4, 2009 at 3:09 AM
ဖိုထိုးတုံးက စက်ဘီးနင်းပေးတဲ့ သမီးလေးပေါ့....
Ma Ma January 4, 2009 at 4:34 AM
မြန်မာအကကို လွမ်းတိုင်း သမီးလေးဆီလာခဲ့မယ်။
pandora January 4, 2009 at 7:36 AM
သမီးလေးရဲ့ အကအလှတွေ နောက်ကိုလည်း အများကြီး ထပ်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
ဒါနဲ့ ကိုဆူး သီချင်းဆိုထားတဲ့ အသံဖိုင်တို့ သားလေးနဲ့ သမီးတို့ရဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တို့ကို ဘေးက sidebar မှာ လင့်ခ်လေးတွေ ပြန်တင်ပေးထားပါလားဟင်။ ပို့စ်တွေ ထပ်ဖုံးသွားရင် ပြန်ရှာရတာ ခက်လို့ပါ။ ဒါလေးတွေကျတော့ မကြာခဏ ပြန်နားထောင် ပြန်ကြည့်ဖြစ်မယ်လေ။ မြန်မာမှုလေးတွေကိုလည်း အလွမ်းပြေ စိတ်လည်းအပန်းပြေပေါ့။
ဦးဂင်ကြီး January 4, 2009 at 3:40 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့အနုပညာမျိုးဆက်ဗျား ကောင်းတယ်သမီးလေးရေ ကျိုးစားနော် ဦးဂင်ကမကတတ်ပေမဲ့ ခံစားတတ်ပါတယ်။
ဒူကဘာ January 4, 2009 at 9:24 PM
အေးဗျာ ...ကျုပ်က အနုပညာမှာ အတီးတခုပဲ ကျွမ်းကျင်တယ်၊ အဲဒီ အတီးက တခါတလေ လွဲလွဲသွားသေး ဟဲ..ဟဲ..လက်ခုတ်တီးတာ ပြောတာ၊ မစ္စတာဆူး မိသားစုကတော့ စံပဲ ...မျိုးစေ့မှန်တော့ အပင်သန်၏တဲ့..အင်း ..ရေခံမြေခံ ကလည်း ကောင်းခဲ့တာကိုး ...ဘရာဗိုဗျားးးးးး ဘရာအကြီးကြီး ...ဗို....ချမ်းမြေကြပါစေ။
khaing January 5, 2009 at 5:19 AM
You did great job.:)
Myo Win Zaw January 6, 2009 at 7:37 AM
% ဇာတ်လမ်း %
“ ကလေးတို့ အဖေ ”
“ ကျနော်လေးစားတဲ့ မိသားစု ”
“ မဒမ်ဆူး မိတ်ဆက် ”
“ အဂ္ဂိရတ်ဖိုထိုးတဲ့ ကောင်မလေး”
“ မျိုးဆက်..သမီးငယ် ”